Akhriso warmurtiyeedka kasoo baxay shirkii Muqdisho ku dhex maray madaxda DFS iyo kuwa maamul goboleedyada
arlaadi November 5, 2017 No Comments
Akhristayaasha sharafta leh waxaan idiinsoo gudbinaynaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii mudada sideeda cisho ah uga socday magaalada Muqdisho madaxda dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabeele, Koonfur galbeed iyo Jubbaland.
Hoos ka akhriso warmurtiyeedka.
Dardargelinta Nabadgelyada dalka iyo Ciribtirka Argagixisada.
Horumarinta hannaanka Federaalaynta dalka.
Dardargelinta dib-u-eegista Dastuurka iyo Abuurista hannaan wadajir ah.
Geedi socodka Doorashada.